Kabadadaari (2021) | MM Movie Store
မှုခငျးရုပျရှငျပါးဝလို့ ဇာတျလမျးစတာနဲ့ တရားခံကိုခနျ့မှနျးနိုငျတဲ့သူရှိရငျဒီကားကိုကွညျ့ဖွဈအောငျကွညျ့လိုကျကွပါတကျတကျစငျအောငျကို လှဲမှာမို့ပါမှုခငျးကား ဆိုပမေယျ့ ဒီတဈခါကားကတော့ အမှုလိုကျရဲ မဟုတျဘဲ ယာဉျထိနျးရဲ အမှုလိုကျတဲ့ကား ဖွဈနလေို့ပါပဲ။
ယာဉျထိနျးရဲဘဝကနေ မှုခငျးဌာနကိုပွောငျးခငျြတဲ့ရဲတဈယောကျက စာမေးပှဲဖွတောအမှတျလညျးမမှီလို့ တျောတျောလေးကိုစိတျညဈနသေူပါတဈရကျမှာ သူ့အပိုငျနရောက ဆောကျလုပျရေးလုပျငနျးခှငျမှာမှုခငျးနဲ့ဆိုငျတဲ့အရာတှေ မတျောတဆတှရှေိ့ခဲ့ပါတယျမှုခငျးရဲဖွဈခဲ့တဲ့ ဆရာသမားက နမေ့အားညမအားကို စုံစမျးပါလရေောနှဈအတျောအကွာခဲ့တဲ့ အမှုဖွဈတာကွောငျ့နောကျကွောငျးရာဇဝငျတှကေိုပွနျလိုကျတဲ့အခါ….
.ပငျစငျစားရဲအရာရှိတဈယောကျနဲ့ လူငယျရဲအရာရှိတဈယောကျကွိုးစားပမျးစား အမှုဖျောထုတျကွရငျးဘာတှဖွေဈလာမလဲ…Tamil crime ဆိုတော့ ထှတှေထေူးထူးညှနျးစရာတော့မလိုပါဘူးအိန်ဒိယမှုခငျးကား ငတျနတေဲ့လူတှအေတှကျတော့ကွညျ့သငျ့တဲ့ဇာတျကားကောငျးပါပဲ
မှုခင်းရုပ်ရှင်ပါးဝလို့ ဇာတ်လမ်းစတာနဲ့ တရားခံကိုခန့်မှန်းနိုင်တဲ့သူရှိရင်ဒီကားကိုကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်လိုက်ကြပါတက်တက်စင်အောင်ကို လွဲမှာမို့ပါမှုခင်းကား ဆိုပေမယ့် ဒီတစ်ခါကားကတော့ အမှုလိုက်ရဲ မဟုတ်ဘဲ ယာဉ်ထိန်းရဲ အမှုလိုက်တဲ့ကား ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
ယာဉ်ထိန်းရဲဘဝကနေ မှုခင်းဌာနကိုပြောင်းချင်တဲ့ရဲတစ်ယောက်က စာမေးပွဲဖြေတာအမှတ်လည်းမမှီလို့ တော်တော်လေးကိုစိတ်ညစ်နေသူပါတစ်ရက်မှာ သူ့အပိုင်နေရာက ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်မှာမှုခင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေ မတော်တဆတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်မှုခင်းရဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဆရာသမားက နေ့မအားညမအားကို စုံစမ်းပါလေရောနှစ်အတော်အကြာခဲ့တဲ့ အမှုဖြစ်တာကြောင့်နောက်ကြောင်းရာဇဝင်တွေကိုပြန်လိုက်တဲ့အခါ….
.ပင်စင်စားရဲအရာရှိတစ်ယောက်နဲ့ လူငယ်ရဲအရာရှိတစ်ယောက်ကြိုးစားပမ်းစား အမှုဖော်ထုတ်ကြရင်းဘာတွေဖြစ်လာမလဲ…Tamil crime ဆိုတော့ ထွေတွေထူးထူးညွှန်းစရာတော့မလိုပါဘူးအိန္ဒိယမှုခင်းကား ငတ်နေတဲ့လူတွေအတွက်တော့ကြည့်သင့်တဲ့ဇာတ်ကားကောင်းပါပဲ